DB Navigator 19.08.p03.00 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 19.08.p03.00 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း DB Navigator
DB Navigator ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုဘိုင်းဖုန်းလက်မှတ်တွေ, Real-time သတင်းအချက်အလက်, အကြောင်းကြားစာများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွားအသေးစိတ်ကိုနှောင့်နှေး - လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ DB Navigator ရဲ့ကျယ်ပြန့်သငျသညျပျော့သွားတာကိုတစ်နိမ့်ဆုံးနှင့်သင်၏ဦးတည်ရာကိုရရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေး။
အဆိုပါ app ထဲတွင်သို့မဟုတ်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ save, ဒေသတွင်းနှင့်ခရီးဝေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့သင့်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။
ထွက်ခွာနှင့်ဆိုက်ရောက်ကြိမ်, လွှဲပြောင်း, Real-time သတင်းအချက်အလက်နှင့် "ကျနော့်ခရီးစဉ်" တွင်တစ်ဦးတစ်ချက်မှာအခြားရွေးချယ်စရာဆက်သွယ်မှုအကြောင်းကိုအားလုံးအသေးစိတ်ရယူပါ။ Push ကိုအကြောင်းကြားစာများကသင်၏ထွက်ခွာ, လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဆိုက်ရောက်အကြောင်းကိုအတိအကျသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွသင်ပေးသညျ။ ဒါ့အပြင် Android Wear အပေါ်ရရှိနိုင်ပါ။
နည်းပြ sequence ကို
ခရီးသွားသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာတွင်နည်းပြ sequence ကိုသင်သည်သင်၏ယူထားတဲ့ထိုင်ခုံနှင့်အတူနည်းပြကိုရပ်တန့်လိမ့်မည်သည့်အတွက်ပလက်ဖောင်းအပိုင်းကိုပြသထားတယ်။
ရိုးရှင်းစွာအ, အလိုရှိသော connection ကိုကျော် left ပွတ်ဆွဲဘွတ်ကင်အသေးစိတျစစျဆေးနှင့်အသင့်လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်ရထားနှင့်အတူအနီရောင်ခလုတ်ကိုကျော်ညာဘက်တစ်ဦးပွတ်ဆွဲအတူ။
သင့်ရဲ့ခရီးဝေးရထား boarding ပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
နှောင့်နှေးနှိုးဆော်သံနှင့်အတူသငျသညျ, အချိန်ဇယားအပြောင်းအလဲကိစ္စတွင်အကြောင်းကြားနှောင့်နှေးနှင့် e-mail ကိုသို့မဟုတ်တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာအားဖြင့်အပြောင်းအလဲများကိုကိုခြေရာခံလိမ့်မည်။
အောက်ပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းအဖွဲ့များအဘို့အဦး-Bahn ရထား, ဘတ်စ်ကားနဲ့ပေါ်လာတာဟာအရင်အဘို့သင့်လက်မှတ်ဝယ်ရန်: AVV (Aachen), AVV (Augsburg), VBB (ဘာလင် & Brandenburg အမည်ရှိသတို့သားက), VBN (Bremen), VVO (Dresden), RVF (Freiburg), HVV (ဟမ်းဘတ်), GVH (Hannover), HNV (Heilbronn), KVV (Karlsruhe), VRS (Köln & Umland), RVL (Lörrach), marego (Magdeburg), VMT (ဗဟို Thuringia), MVV (မြူးနစ်), VGN ( Nuremberg), TGO (Ortenau), Bodo (Ravensburg & Umland), VRT (Trier), RMV (Rhein-ပင်မ), VRM (Rhein-Mosel), VRN (Rhein-Neckar), VRR (Rhein-Ruhr), RNN ( Rheinhessen-Nahe), VVW (Rostock), saarVV (Saarland), SH-Tarif (Schleswig-Holstein), VVS (စတုဂတ်), Westphalia-လက်မှတ်ဖိုးများနှင့် WTV (Waldshut) ။
Saver ခ Finder
အဆိုပါချွေတာခ Finder နှင့်အတူတတ်နိုင်ခရီးဝေးရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာပါ။
ကို Select လုပ်ပါနှင့်အထူးသဖြင့်ထိုင်ခုံ ကြိုတင်ယူထား
အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ထိုင်ခုံ display ကိုရထားပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အမတ်နေရာခြုံငုံသုံးသပ်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သင်ကြိုတင်ယူထားရန်ဆန္ဒရှိသည့်ထိုင်ခုံကို select ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးအနှုန်းများပေါ်တွင်သင်၏လက်မှတ်တွေ Cancel နှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တစ်ဦးဆိုင်ကယ်နှင့် DB Shuttle-Service ကို Call
ဘူတာကနေသို့မဟုတ်ခရီးတစ်ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ် DB Shuttle ဝန်ဆောင်မှု Call ကိုရွေးပါ။ အဆိုပါ DB လွန်းဝန်ဆောင်မှုဂျာမနီမှာထိပ်ဆုံး 100 ဦးမြို့ကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အရေးအပါဆုံး DB အခြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်ရပ်လိုက်နိုင်သည်။
ကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: အ DB Navigator ကနေတဆင့်လက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်, သင် TLS 1.2 encryption ကို protocol ကိုထောကျပံ့ပေးသောအနည်းဆုံး Android ဗားရှင်း 4.4, လိုအပ်ပါတယ်။ bahn.de/tls : မှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
သင်သည်ငါတို့အဘို့မဆိုအိုင်ဒီယာသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်ရတယ်ဖူးသလော ရိုးရှင်းစွာအကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့၏အကြံအစည်သိစေရန် In-app ကိုအဆက်အသွယ် function ကိုသုံးပါ။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက် bahn.de/app မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။
DB Navigator အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
DB Navigator အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
DB Navigator အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
DB Navigator အား အခ်က္ျပပါ
rubystars စတိုး 5.48k 1.49M
DB Navigator ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း DB Navigator အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 19.08.p03.00
ထုတ်လုပ်သူ Deutsche Bahn
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.bahn.de/m/view/de/home/agb/datenschutz.shtml
လက်မှတ် SHA1: 8D:2E:4A:A5:61:2F:CF:FE:A2:1C:01:9A:B1:D0:F6:DA:A6:ED:38:3E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Peter Talke
အဖွဲ့အစည်း (O): HaCon Ingenieurgesellschaft mbH
နယ်မြေ (L): Hannover
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Niedersachsen
DB Navigator APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ